प्रारम्भिक गर्भावस्थामा एन्टेन
एक महिलाले गर्भवतीको बारेमा सिक्छ, ओटल्जोझले उसको स्वास्थ्य र जीवनशैलीको बारेमा अत्यन्त सावधान रहन्छ, किनकि यो यसको भविष्यको बच्चाको विकासमा निर्भर गर्दछ। विशेष गरी महँगो भए पनि, एक महिलालाई यसको लागि दिइएका सर्वेक्षणमा दिइनु पर्छ, विशेष गरी एक खास विकिरण खुराक।
<< p> AI को आन्तरिक अ of ्गहरूको राज्यको सबैभन्दा जानकारीपूर्ण अध्ययनहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ अक्सर अक्सर सही निदापनको एक मात्र तरीका हो। यद्यपि रेडियोलॉजिकल अनुसन्धान अराजकता को एक निश्चित खुराक को एक व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित छ, जसले महिला र भ्रुणको सामान्य विकिरण पृष्ठभूमिमा प्रभाव पार्दैन। त्यसकारण, एक्स-रे होल्डिंग गर्न सहमत हुनु अघि, यो "विरुद्ध" र "विरुद्ध" सबै "र" सर्वेक्षणको तौल गर्न आवश्यक छ।
गर्भावस्थाको साथ एक्स-रेको बारेमा सामान्य अवधारणाहरू
<< p> X-CHA परीक्षाको परिणाम लामो र थोरै विवरणहरूमा राम्ररी अध्ययन गरिएको छ। तपाईलाई थाहा छ, विवादकको ठूलो खुराक एक साधारण व्यक्तिको स्वास्थ्यमा झल्किन्छ, जुन अधिनियम महिलाको कुरा गर्नु हो। विभिन्न बाह्य जीवहरूमा कमजोर एक महिला जीवमा विकास गर्दै, त्यसैले एक्स-रे ज्यादै थोरै व्यक्तिको गठनको गठन गर्न सक्दछ।
X-रेको प्रभावमा, कक्षहरू सेल डिभिजरको नतीजाहरू वा उल्लंघन गर्न सकिन्छ, र यसले क्यान्सर गर्ने ट्यूमरहरू समाप्त गर्न र अन्त्य गर्न सक्दछ। एक महिलामा 1 M3 भन्दा बढी भन्दा बढी एक महिलामा खुराक एक महिला प्रजनन धेरै गम्भीर अवस्थामा उत्पन्न हुन सक्छ। यसका साथै, बच्चाहरूमा अक्सर पोस्टरेन्टेन विघटन कार्य प्रणालीमा गम्भीर उल्ल .्घन देख्न सकिन्छ।
कुन केसहरूमा निर्धारित एक्स-रे गर्भवती छ र यसले के धम्की दिन सक्छ भने? / H2>:
वास्तवमा, जब डाक्टरले गर्भवतीमा एक्स-रेलाई गर्थे भने पहिल्यै सचेत छ कि आमाको स्वास्थ्यको लागि सम्भावित बजेट सम्भावित परिणामहरू भन्दा बढी हुन्छ। उचित उपचार बिनादेखि डिस्क्युल च्यानलमा इन्फेशनलीका एक साझा विधिलाई तोकिएको छ, जहाँ संक्रमणको केन्द्रबिन्दु बधाई छ, जुन पछि रेन्डुलेटकीय स्क्वायरसमा। शरीरभरि अन्य अंगहरू।
धेरै महिलाहरु आफैंको डरले दन्त चिकित्सा समस्याहरूको समाधानलाई बच्चाको झिभार भन्दा पहिले स्थगित गर्न रुचाउँछन् जुन जरा गलत छ। सांसपको विकासको साथ, बच्चाको संक्रमणको विशाल जोखिम र गम्भीर उपस्थितिको साथ जटिल जेनेराको ठूलो जोखिम।
अपरिहार्य गर्भवती महिलाको रेडियोलॉजिकल परिक्षण हो किनकि मांसपेशिस्टेस्टम वा बिभिन्न घाइतेहरू र फ्र्याक्चरहरू। यसलाई स्पष्ट रूपमा विचलित हड्डी सुधार गर्न को लागी निषेधित छ वा Gypsum नानोनोसेल क्षेत्रहरु को लागी निषेध गरिएको छ, किनकि यस्तै हेस्पेलिशन गम्भीर रूपमा के गर्न सक्छ।
एक्स-रे अध्ययन अक्सर बिभिन्न रोगहरू, रोगलाइ पहिचान गर्न गरिन्छ। तर समग्र विकिरण मानव शरीरको लागि हानिकारक छ, किनकि यो विभाजित छन् कोषहरूमा विनाशकारी प्रभाव छ। वयस्कहरूमा त्यस्ता कोषहरूको त्यस्तो कुनै कोषहरू छैनन्, तर भ्रुणहरू उनीहरूले अगाडि बढ्ने र विकासको आधारको रूपमा काम गर्छन्। तसर्थ, एक्स-रे गर्भवती महिलामा कथित छ, विशेष गरी सुरुमा (12 हप्ता सम्म)।
गर्भावस्था भनेको त्यस्तो समय हो जब सबै सम्भावित नकारात्मक प्रभावहरूबाट आफूलाई जोगाउन आवश्यक छ, विभिन्न प्रकारका उत्सर्जनहरू सहित। तर त्यहाँ छुट्टै परिस्थितिहरू छन् जब रेडियोग्राफी निकायको सचेत विवादमा आवश्यक पर्दछ। यस अवस्थामा कसरी हुन, के यो सम्भव छ कि एक्स-रे गर्न वा भ्रुणको रक्षाको पक्षमा अस्वीकार गर्न सकिन्छ? अध्ययनको लागि के मितिहरू सबैभन्दा खतरनाक हुन्छन् र त्यहाँ एक विकल्प छ?
जब एक्स-रे गर्भावस्थामा आउँदछ जब गर्भावस्था
यो विकिरण डायनास्टिकको सरल र सस्तो विधि हो, तपाईंलाई स्न्यापशटका बखत निदान गर्न वा सम्पूर्ण रोग विशेषज्ञहरूमा निदान गर्न अनुमति दिदै। त्यसोभए, प्राय जसो तिनीहरूलाई श is ्काको बारेमा शंकाको X-रे अध्ययन आवश्यक पर्दछ, साथै क्याल्स वा क्याल्स अथवा यस्तो निदानको बारेमा शंकाको अवस्थामा। थप रूपमा, दाँत र अरू केही परिस्थितिहरूमा संदिग्ध नोआलासिया कंकालनमा एक्स-रेलाई आवश्यक पर्दछ। के स्थितिमा महिलालाई तस्विरहरू लिन सम्भव छ, र कुन विशेष सर्तहरू अवलोकन गर्न आवश्यक पर्दछ?
गर्भावस्थाको क्रममा एक्स-रे गर्न सम्भव छ?
कीटाणु, र त्यसपछि फलहरू अत्यधिक संवेदनशील हुन्छ, जुन रेडियोबोटीको लागि सामान्यतया हो। तसर्थ, भविष्यका आमाहरूका लागि यो अनुसन्धान विधि सुरक्षित गर्न सकिदैन, यसबाहेक, केही समयको क्रममा, यसले विकासको कारण र भ्रुणको जीवन गम्भीर छ।
तसर्थ, यो गर्भावस्थामा रेडियोग्राफीको लागि सिफारिश गरिएको छैन, तर अध्ययनको कार्यान्वयनमा कुनै पूर्ण प्रतिबन्ध छ।
। किन? कुरा यो हो कि त्यहाँ विशेष, जीवनका लागि जीवन गवाही छ, जसमा रेडियोग्राफीको सुधार हुन्छ, जब यसको नतीजाले सही निदान र त्यसपछिको उपचार गर्न असम्भव छ, र यो गर्न असम्भव छ। धेरै बढी खतरनाक बन्नुहोस्। एक पटक विनियोजनको बरु प्रभावित क्षेत्रको रेडियोग्राफ प्राप्त गर्न।
प्रक्रियामा अन्तिम निर्णय अनुसरण गर्दै?
rdiogrogy र गर्भवती महिलाहरु को एक गर्भवती महिलाहरु को विकास भ्रुण को टिशू मा एक अध्ययन को लागी उपकरण, उपकरण द्वारा उत्पादन भएको प्रमाणित संग सम्बन्धित छ। तसर्थ, चित्र उपयुक्त छ कि छैन भन्ने निर्णयको आधारमा उपयुक्त छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्नुहोस्।
तेलको एक्सपोजरले तेल पानीको Innemation को कारण, गठन नि: शुल्क कट्टरपन्थीहरूलाई भ्रुण सेल को उल्लंघन गर्न योगदान गर्दछ। यस प्रक्रियाले आनुवंशिक पासोबिजहरूतर्फ डो leads ्याउँछ, ट्यूमर गलत-बीज प्रदान गर्दछ
एक्स-रे गर्भावस्थाको तेस्रो हप्तामा गर्नुहुन्न। भारको दुई महिनासम्म भ्रुण, एक्स-रे अध्ययन स्पष्ट रूपमा कथित छ।
यदि गर्भावस्थाको बाह्रौं हप्ताको आगमन पछि, यदि अल्ट्रासाउन्डको भ्रमण गर्न सल्लाह दिन सामान्य रूपमा विकसित हुन्छ भने।
<< P> शरीरको फराकिलो क्षेत्रको बहुविधै असुरक्षित प्रदान आनुवंशिकीहरूको सल्लाहको आवश्यकता छ। कम गर्भावस्थामा कम्तिमा खतरनाक एक्स-रे हो।
NETITITED अन्तिम म्यादमा एक्स-रे पारितको लागि अपवादहरू सानपिन द्वारा शासित छन्। X-रेले बेस्टमा गर्भवती गर्न सक्दछ, डाक्टरले स्थितिको जटिलतालाई ध्यानमा राखेर, उपकरणको छनौटलाई ध्यानमा राख्दछ।
सेप्प्स को परिणामस्वरूप कांसाको परिणामको रूपमा, हड्डीहरूको हड्डीहरूको गलत फ्यूजन एक्स रे-रेमा स .्केत हो। मूत्र क्षेत्रको रोगको सम्भावित शव्द अन्वेषण स्थगित गर्न वा वैकल्पिक अनुमतिले परीक्षा विधिहरू फेला पार्न वा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ
<< p> त्यहाँ एक प्रणाली छ जुन X - रेहरू बुझ्न सक्दछ, डिजिटल मानमा रूपान्तरण गर्नुहोस् र कम्प्युटर स्क्रिनमा तस्वीर प्रदर्शन गर्नुहोस्। रेडियोविजन - 0. सेकेन्ड भन्दा बढीको एक अंश बनाउनका लागि उत्तम तस्वीर बनाउन एक उपकरण। तदनुसार, बिरामीको विनियमितको खुराक न्यूनतम मानहरूमा ड्रप हुन्छ।
प्रक्रियाहरू एक्सपोजरको कम डोजको साथ विशेष उपकरणहरूमा गरिन्छ। Vizrographer को उपयोग को साथ जोखिम दश गुणा हुनेछ। प्रक्रिया समय उल्लेखनीय रूपमा कम छ। यद्यपि यो सिफारिश समय सीमालाई विचार गर्नु लायक छ।
एक्स-रे हात गर्भावस्थाको समयमा पनि ढाल गर्न अनुमति दिइनेछ। यस मामलामा, स्क्रिनको संख्या बढाउन, उनीहरूको अनुप्रयोगको क्षेत्रको संख्या बढाउन, एप्रोनले प्रत्यक्ष बीमबाट होइन, प्रतिबिम्बित विज्ञप्तिको बिरूद्ध संरक्षण गर्दछ।